DEG DEG: Jubbaland oo xukun dil ku fulisay Askari – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADEG DEG: Jubbaland oo xukun dil ku fulisay Askari
July 17, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on DEG DEG: Jubbaland oo xukun dil ku fulisay Askari
(Warqaat.Com)—Maxkamada Ciidamada qalabka Sida ee Jubbaland ayaa dil ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada Jubbaland kadib dhageysiga kiis dil ah oo loo heystay.
Cabdiraxmaan Ilyaas Jiirow oo ka mid ahaa Ciidamadda Jubbaland ayaa shalay askari kale ku dilay Xaafadda Calanley ee Magaalada Kismaayo, Marxuumka la dilay ayaan lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Axmed Iidle.
Maxkamadda ayaana la horkeenay Marqaatiyaal, intaas kadibna xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidanka qalabka sida Mowliid Axmed Yaasiin ayaa sheegay in dacwadda kiiskan ay tahay mid dil ah oo ay ku cadahay in eedaysane Cabdirahmaan Ilyaas Jiirow in uu si bareer ah u dilay marxuumka lagu magacaabo Cabdinaasir Axmed Iidle .
Markii ay soo dhamaatay dhageysaga dacwadda loo haystay Cabdiraxmaan Ilyaas Jiirow, oo ahaa mid dil ah ayaa gudoomiyaha maxkamada ciidanka qalabka sida Bashiir Maxamuud Xareed sheegay in ay maxkamadu dil ku xukuntay Eedeysane Cabdiraxmaan Ilyaas.
Intaas kadib Eedaysane Cabdirahmaan Ilyaas Jiirow markii Maxkamadda Ciidamadda qalabka Sida xukun ku riday ayaa lagu fuliyay xukunka oo ahaa qisaasta marxuumkii uu dilay.
Ciidamo ka mid noqon doona AMISOM oo tababar loo soo xiray
674,753 total views, 10,628 views today
674,753 total views, 10,628 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
674,626 total views, 10,628 views today
674,626 total views, 10,628 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
674,657 total views, 10,630 views today
674,657 total views, 10,630 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
674,718 total views, 10,629 views today
674,718 total views, 10,629 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
674,776 total views, 10,629 views today
674,776 total views, 10,629 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]